Faa’idada Naas Nuujinta | Tuke Somalism - Tukesomalism.com
Buugga Himiladaada Hano – Ninna maankiisa ma saluugo!
Cabdijabaar Sh. Axmed, June 2, 2018
Faa’idada Naas Nuujinta
Abshiro Axmed Cabdi — July 8, 2019
Caanaha naaska hooyada waa cuntada ugu wanaagsan ee cunigu helo. Kuwaas oo haddii cunaga sifiican u nuugo uu ku noqonaayo cunaga meel walbo ka dhisan sida dhanka maskaxda iyo jirkaba. Caanaha ugu horeeyo ee ka imaado Naaska markey hooyadu dhasho waxa loo yaqaan Dambar. Dambarku waa caano adayga ah oo jaale ah. Waxaan lasameeyaa intii hooyadu uurka leedahay. Caanaha Dambarka: waa caano ka difaacayo cudurada qatarta ah ee soo weeraro cuniga.
Waxayna ka hortagaan infakshanka iyo dhamman caabuqada haleeli karo cuniga. Caanahaan ayaa waxaa soconayaan 6 saacado ee ugu horeyso umusha. Kadib waxaa imaanayo caano caadi ah kuwaasoo oo cuniga u noqonaayo Cunto iyo Biyaba.
8 Faa’ido ee Caanaha Naaska u leeyihiin Cuniga:
1. Caanah naaska waxay koriyaan cuniga.
2. Waxay ka difaacaan xanuunada soo weeraro cuniga.
3. Caanaha naaska waa qalajiye dabiici ah.
4. Caanaha naaska waxay caawiye u yihiin hooyada iyo cunigaba.
5. Caanaha hooyada waa kuwo fareysh ah.
6. Caanaha hooyada waa kuwo raqiis ah, mana aha kuwo lacag joogo.
7. Caanaha hooyada waxa uu cunigu unuugaa si wanaagsan uuna ku raaxeysanayo naaska.
8. Caanaha hooyada waa kuwo aan sameysa kaaga baahneyna.
Faa’ido ee Caanaha Naaska u leeyihiin hooyada:
1. Caanaha hooyada markii cunigu nuugo waxay ka qeyb qataan isku soo arruurida minka.
2. Caanaha hooyada markii cunigu nuugo waxaa hooyada kayaraado xanuunka naasaha maxaa yeelay waxaa kabaxay caanaha oo sababay canuunka.
3. Naasa nuujintu waxay ka qeyb qaaadtaa isjeclaanshaha hooyada iyo cuniga.
4. Hooyadu markay nuujineyso cuniag waxay dareemee hooyonimo iyo jeceylka cuniag.
6. Naas nuujintu waxay ka hortag unoq kartaa cudurada qatarta ah sida kanserka.
Tags: Faa'ida Naas Nujinta
Next post GODOB JACEYL - Goormaad Qancaysaa Nafyahay? - Q1aad
Previous post Odhaahyo Murti ah